सोमबार ५ वजे मन्त्रिपरिषदको बैठक, यी मुख्य विषयको निर्णय के होला भन्ने सर्वत्र चासो ? « Pen Nepal
सोमबार ५ वजे मन्त्रिपरिषदको बैठक, यी मुख्य विषयको निर्णय के होला भन्ने सर्वत्र चासो ?
Published On : 14 September, 2020 12:39 pm By : पेननेपाल
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको चार वर्षे कार्यकाल आइतबार सकिएको छ । त्यस्तै सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी समेत पाएका अर्थ तथा सञ्चार मन्त्री डा। युवराज खतिवडाले भदौ २० गते राजीनामा दिएसँगै सो पद पनि खाली छ ।